Iflethi okanye indlu ekwicomplex enomhlaba omhle - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enomhlaba omhle
Sucre , Chuquisaca, Bolivia
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ibiza i-60keleyo. Sinamagumbi ayi-2, amagumbi ayi-1 anebhedi elala abantu ababini + ibhedi enye; kwelinye igumbi sineebhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, zilungele abantu abayi-4 ukuya kwabayi-5 abaneebhedi eziyi-4. Inegumbi lokuhlambela eliyi-1, ikhitshi elinento yonke oyifunayo ukuze upheke konke ukutya kwakho, ifriji, iimbiza, iipani, iipleyiti, izinto zokuhombisa, iikomityi, i-microwave, i-blender, njl njl. Sine-Wifi, i-cable TV kunye neegaraji ezifumanekayo ukuba ufika kwindawo ohamba kuyo:) .
Igumbi lokuhlala elitofotofo eline-
indawo entle yesixeko kunye neentaba.
Malunga neendawo ezisetyenziswa ngumntu wonke esinazo ipuli nesauna ( jonga ukufumaneka namaxabiso ukuba unomdla) .
- Ngaphakathi endlwini sinegaraji ukuze iflethi nganye igcine imoto eyi-1 ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
- Ukusetyenziswa kwepuli enamanzi ashushu yi-80bs kwiintsuku ezi-3 zokuhlala (ubuncinane abantu aba-3). Iqondo lobushushu alikho ngokukhawuleza, ngoko kufuneka licelwe lize liqinisekiswe kwiintsuku eziyi-2 ngaphambi kokufika kwakho.
- Ukusetyenziswa kwe-sauna yi-50bs iiyure ezi-2 zokusetyenziswa kwabo bahlala kule flethi okanye kwindlu ekwicomplex.
Sikwindawo ethe cwaka , ekhuselekileyo nehlala abantu, kwimizuzu eyi-15 ukusuka edolophini ngemoto.
Iibloko eziyi-6 ukusuka kwiivenkile ezinkulu, imizuzu eyi-8 yokuhamba yiAvenida Américas apho unokufumana iintlobo ezahlukeneyo zokutya okukhawulezayo, amayeza, iibhanki, njl .
Ndifumaneka ngokupheleleyo ukuba kukho nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo onokuba nazo ngefowuni okanye ngoWhatsApp, ndiza kuzama ukuqinisekisa ukuba yonke into ilungisiwe ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, inombolo yam yefowuni ngu-76117922. Ungalibali ukuba ikhowudi evela eBolivia ithi 591
Ndifumaneka ngokupheleleyo ukuba kukho nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo onokuba nazo ngefowuni okanye ngoWhatsApp, ndiza kuzama ukuqinisekisa ukuba yonke into ilun…